ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းလို့ မရတဲ့ အိပ်မက် တစ်ပုဒ်
နွေရာသီ ခုနှစ်ဆယ့်ငါး ရာခိုင်းနှုန်း မိုးရာသီ နှစ်ဆယ့်ငါး ရာခိုင်နှုန်း ကို
မိုးဥတုလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့/နိုင်ငံတော်။
လှမ်းကြည့်တော့ နေလုံးဟာ ဒီအကွာအဝေးအတိုင်းပါပဲလား
သိပ္ပံပညာမှာ ညံ့ဖျင်းခဲ့လေခြင်း နိုင်ငံတော်သစ်တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရာမှာ
ဖုတ်ဖတ်ခါပြီး ထ သွားတဲ့ ရှေးဦးလူသားများအတိုင်း အားလုံး လည်း ဖုတ်ဖတ်ခါ။
မြစ်ကြမ်းပြင်မှာ ထိုင်နေရင်းက လေယာဉ်ပျံတွေကို ရေတွက်ရ
ဒိုက်သရိုက်တွေဟာ မျက်နှာပေါ်မှာ သစ်ငုတ်တစ်ခုအမှတ်နဲ့ ရစ်ပတ်တင်ကျန်
စမတ်ဖုန်းထဲက နုတ်ထဲမှာ ဒီနေ့အတွက် ၀ယ်ခြမ်းစရာတွေ ပြန်ကြည့်
ပြီးနောက် အမေရိကန် ညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုကို ခုံရုံးစစ် အရေးယူမှာလား
တစ်ခါတစ်ခါ သတင်းခေါင်းစီးတွေလို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တွေးဖြစ်ရုံကလွဲလို့
မှတ်ချက်ပေး မျှဝေရုံအပြင် ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး
ဘယ်သူ့ဒိန်ခဲတွေ ရွှေ့လာသလဲ မသိ။ ကြွက်တွေနဲ့ လမ်းမှာတိုးပြန်တယ်။
မင်းတို့ ဒိန်ခဲ ငါ ထပ်ရွှေ့ကြည့်ချင်တယ် ရမလား လို့ လှမ်းအော်တော့
ကြွက်တွေ ခဏ ရပ်တန့်သွား။ ပြီးတော့။ ပြိုင်တူ အော်ရယ်သွား။ ပြီးတော့။ ခပ်သုတ်သုတ်ပဲ ရွေ့လျားသွား။
ကိုယ့်မှာသာ လေးကန်နေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ မြန်လှပြီ သတ်မှတ်ထားရ။
နွေအပူနဲ့ မိုးဥတုထဲ အစတွေ ပြန်ကောက်။
ဖြောင့်သမျှ ပြန် စီစဉ်။
ကိစ္စတွေဟာ ကိစ္စ ဖြစ်လို့ကို မဆုံးနိုင်ဘူး။ ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ်
စိတ်လိုလက်ရကို ဆဲရေပစ်လိုက်မိတယ် ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ အခြား ကိစ္စတွေကို။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 1:46 AM No comments:
ပြုတ်ထွက်သွားနေတဲ့ ၀ါကျတစ်ကြောင်းရဲ့ အရိုးအဆစ်တွေ
ဝေဟင်မှာ လွှင့်ထားတဲ့ လှိုင်းအလျားတွေ
များစွာ။ လမ်းခွဲတွေ ဟာ
နယ်မြေသစ်လာရှာတဲ့ ဂြိုဟ်သားတွေရဲ့ ယာဉ်ပေါ်ကို
လက်ရွေးစင် လူပြိန်းတွေဟာ ၀တ်စုံပြည့်။
ခေတ်မီအေးချမ်းတဲ့ မြို့တစ်မြို့ရဲ့ အသွင်ကို ဆောင်ယူလျက်။
ညများမှာ မူးနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေကို ရှောင်ရှားရင်း။
စာရိုက်မှားရုံတင်မဟုတ်ဘဲ အမှားကို မေ့တတ်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွေက်
စာမျက်နှာကို မှတ်သားထားတဲ့ မွန်းစတားလေး
နံရံရဲ့ ညာဘက် တစ်ခြမ်းကို စာအုပ်စင်အဖြစ် ထားမယ်
အဂါင်္ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ ရေရိပ်ရေယောင် တကယ်ရှိသလား
Intersteller ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ဂေါက်သွားသလားပဲ
အမည်။ မိဘ အမည်။ အဘိုး အမည်။ အဘေး အမည်။ အဘီအမည်။
သူတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်။ သူတို့ရဲ့ မှတ်တိုင်။
ခရုငယ်ဟာ မပုကြွယ်ကို တွေ့သွားခဲ့တယ်
မပုကြွယ်ဟာ သိပ်ပြိန်းတယ်လို့ သိသွားခဲ့တယ်။
ခရင်းသွားချွန်ထက်ပေါ်မှာ တွေ့ကြပြီပေါ့ ...ကြွက်တွေ
ကြောင်တွေဟာ ကြွက်တွေကို မစားခင် အနည်းငယ်တော့ ဆော့ကစားတတ်သေးတယ်။
ကြွက်တွေကို မစားခင် ကြွက်တွေ နားမလည်တဲ့ နိုင်ငံရေးစကားတွေ
ဟိတ်ဟန် အပြည့် အော်ဟစ် ငြင်းခုံ
ပထမဆုံး လန့်နိုးရတဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ
ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ ပုရွက်ဆိတ်လူသားကို သစ္စာဖောက်လိုက်ကြတယ်
ချွေးသံရွှဲရွှဲနဲ့ အခြေခံဥပဒေကို အလောတကြီး
အတည်ပြုတဲ့ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ဟာ အရေးမကြီးခဲ့ဘူး။
ပညာမကုန်သေးတဲ့ ဆံသဆရာရဲ့ လက်အောက်က
မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 1:28 AM No comments:
မြို့ကို မင်ရည်ကျဲကျဲနဲ့ ကျဲပက်လိုက်တိုင်း
လျော့ရဲနေတဲ့ လမ်းမကြီးမှာ အရှိန်အမြင့်ဆုံးတင်ထားတဲ့ စိတ်နဲ့ ပေါက်ပြဲနေတဲ့ ဘီးတစ်ခု ။
သေသေသပ်သပ် ရိုက်ထားတဲ့ သစ်သားခုံတန်းလေးမှာ ချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့
ရေးထိုးထားတဲ့ ကော်ရက်ရှင် ဖြူဖြူလေးတွေ
ညအခါ ကြည်သာတဲ့ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေလို ဖွေးဖွးလှုပ်။
ခေတ်တစ်ခေတ် မြို့တစ်မြို့ရဲ့ တက်တူးတွေပေါ့။
ညနေခင်းများစွာမှာ မြစ်ရေဟာ ငြိမ်လွန်းတယ်
သေနေတဲ့ အလျင်နဲ့ ရွေ့နေလိုက်တာများ
စနစ်တစ်ခုက လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့ ခြေလှမ်းများအတိုင်း။
ပုဂံဟာ တည်နေဆဲ မြဲမြံနေဆဲ။
ရောခ့်သီးချင်း အပြင်းစားတွေ မှုတ်ထုတ်နေတဲ့ အိတ်ဇောပိုက်တွေဟာ
2012 ရုပ်ရှင်ဟာ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်လွန်းခဲ့ပေါ့။
တစ်ခါက မြို့အထွက်မှာ သက်တမ်းရှည် သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင် ရှိခဲ့ဖူးတယ်
သက်တမ်းရှည်သစ်ပင်ကြီးဆိုတော့ သက်တမ်းက အရှည်ကြီးပေါ့
ဒီ့ထက်လည်း မပိုပါဘူး ပြီးတော့လည်း
မိုးသည်းတဲ့ တစ်နေ့မှာ လဲပြိုသွားခဲ့တာပဲ။
ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်များမှာ ပျော်ရွှင်သံဟာ ယောင်မှားလို့တောင် ထွက်မလာခဲ့ဘူး။
နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၄၄ မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 11:31 PM No comments:
နံရံတစ်ခုကနေ နံရံတစ်ခုဆီ အဖိတ်အစင်
ဒီနေ့ ထိတွေ့မိတဲ့ စာရွက် အရေအတွက်ကို စိတ်နဲ့ ပြန်ရေတွက်ကြည့်။
နေ့ဟာ စာရွက်တစ်ရွက်လို လေထဲမှာ ဝေ့ကာ ၀ဲကာ။
မြို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ် ရှုပ်သထက် ရှုပ်လာတဲ့ ယာဉ်မီးခိုးငွေ့တွေထဲ
အောက်စီဂျင်တွေ ဘယ်သစ်ပင်မှာ သီးပွင့်နေကြပါလိမ့်။
ဘယ်သူမှ မရွှေ့လို့ မရွေ့ခဲ့တဲ့ အတိတ်ကာလ ချဉ်ဖတ်များနဲ့။
ကော်ဖီမစ်ထုပ်ထဲမှာလည်း ကျေးဇူးတရား သက်တမ်းဟာ ကုန်ဆုံးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း မနက်က ကော်ဖီဖျော်တုန်းက သတိတရ။
အခုတော့လည်း လွမ်းသလိုလို ဆွေးသလိုလို ပစ္စုပ္ပန် ကိစ္စများ မှာ ပျင်းရိနေမြဲ။
ပွဲတော်ဟာ ဗျောက်ဖောက်သံတွေနဲ့ ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ရှာရင်း နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်ဖြစ်သွားလေခြင်း ဂျေဆွန်ဘွန်း နဲ့အတူ
လူတွေများခဲ့တယ်။ နာမည်တွေများခဲ့တယ်။ စရိုက်တွေ များခဲ့တယ်။
ဒီအရေးအသား မချောမမွေ့ကြီး အသက်ရှည်မှ ရှည်ပါ့မလား စိုးရိမ်ခဲ့ရ။
နှစ်ရှည်လများ အသံဆိုးတွေဟာ အသက်ရှည်ခဲ့တုန်း Short Film တွေမှာ
ကြည့်ရ မောရ ဒါပဲလား ဒီလိုချည်းပဲလား ဘယ်မှာလဲ ဘာလဲ ဘာညာ ဘာညာ။
နေ့စဉ် သူများတကာရဲ့ Status တရားတွေ လိုက်နာရင်း ခေတ်ပေါ်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ ဟာ မလွယ်ပါဘူး။
မြန်မာစကားပုံ ကျမ်းကုန်အောင် ဖြစ်ပျက်နေခြင်းထဲ သိုးဆောင်းစကားပုံထဲက လူ ။
မတရားမှု ဖြစ်ဖြစ် တရားမမျှတမှုဖြစ်ဖြစ် ရေးကြီးခွင်ကျယ် ကောက်ရိုးမီးအဖြစ်နဲ့ပဲ
မီးခိုးတွေ မွှန်ခဲ့ရတဲ့ အဆုတ်နဲ့ ကြပ်ခိုးတွေ စွဲခဲ့ရတဲ့ စိတ်နဲ့။
အသေခံဖောက်ခွဲချင်စိတ်တွေဟာ အမည်နာမ အစစ်အမှန်မရှိ။
ဖောက်ခွဲပြီးတိုင်း ဖြစ်နေကျကြီးအတိုင်း လည်ပတ်ပြီးတိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး
အာရုံကြောတွေ အားနည်းခဲ့တယ် အရိုးကျီးပေါင်းတွေ တက်ခဲ့တယ်
ကဲ ဘာကောင်းခဲ့သလဲ ယနေ့ သတင်းထူးများ။
ညနေ ၄ နာရီ ၁၁ မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 11:30 PM No comments:
အပြင်းတွေ သောက်တိုင်း ဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စ
ဘယ်သူမှ ရေရောတာ သိပ်မကြိုက်လှဘူး
ဒီလိုပဲ အကျင့်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း ပြုံးပြလိုက်တယ်
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုး စီးပွားဖို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်
ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး အတွင်းထဲထိ ထိုးဖောက် လှန်လှောကြည့်
ရေရောထားတဲ့ ရွှေရည်တွေ ငါ့ရှေ့ကနေ ဖယ်လိုက်စမ်းကွာ
ကြယ်ပြောက်ကြယ်မွှန်း တွေ နဲ့ စကားတွေက တောက်ပလှရဲ့
အပေးအယူကိစ္စတွေ နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးပြီ
မီးလင်းလိုက် မီးမှောင်လိုက် မီးတောက်လိုက်
အဲ့ဒီရေရောထားတဲ့ အရေးအသားတွေ ပိုစ့်လုပ်တာတွေ တော်ကြစမ်းကွာ
တည့်လွန်းတော့ ရွဲ့သွားတာပေါ့ လမ်းကြောင်းမှန်သမျှ
ရွဲ့သမျှ အမှားကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတိုင်း ရေမရောတာပဲ ကြိုက်တတ်လာ
ကြောင်တွေကလည်း ကြောင်တွေပဲ အကျင့်ကို မဖျောက်
ကြွက်တွေကလည်း ကြွက်တွေပဲ အသံကို မရပ်
ဝက်တွေကလည်း ဝက်တွေပဲ ခဏလေးကို မနား
အဲ့ဒီရေရောထားသမျှ ရေထဲသာ သွန်ပစ်လိုက်ကြစမ်းကွာ။
ည ၈နာရီ ၂၂မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 11:29 PM No comments:
Black Hole ထဲ ကျွံနေတဲ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်
အသံမြည်ပြီး မရွေ့တဲ့ နာရီလက်တံ
ကလေးဘဝက ထိုင်ခုံပု အဟောင်းကလေး။
ညနေ ၄နာရီ ၅၈မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 11:28 PM No comments:
အချပ်​လိုက်​ကွာကျ​နေတဲ့ ​ဆေးသား​တွေလို အာရုံ
ယုံကြည်​ချင်​တဲ့ စိတ်​ရှိရင်​ ယုံကြည်​လိုက်​ ။ ​ဝေဒနာ​တေးထပ်​​တွေဟာ
မရိုးနိုင်​ မအီနိုင်​တဲ့အပြင်​ ပလက်​​ဖောင်း​ပေါ်မှာ အနင်းခံ​နေရတဲ့ စိတ်​​တွေကသာ ဇာတ်​လိုက်​ဖြစ်​လာခဲ့​တော့။ အဆင့်​အတန်းဟာ ခွဲခြားစရာ မလိုဘဲ ကွဲပြားပြီးသားဖြစ်​တဲ့အ​ကြောင်း။ လမ်း​ဘေး​​ဈေးမှာ​ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်း မဟုတ်​တဲ့အတွက်​ ကဗျာကို ​ဈေးမဆစ်​ဖို့ ​ပြောချင်​တယ်​။ မ​ကောင်းမှုဟာ နက်​ဝက်​ဘ်​ ​ဒေတာ အွန်​လိုက်​တိုင်း တလှိုင်​လှိုင်​ နယူးဖိဒ်​​လေ့ရှိ။ အခုရက်​ပိုင်းမှာ ခပ်​စိပ်​စိပ်​ဖြစ်​လာသမို့ လက်​​တွေလည်း ပွန်းလာသလို စတစ်​ကာလည်း ​ပေပွ။ ပရိုမိုးရှင်း​ပေါင်းစုံဟာ မိုးရာသီ​ရောက်​ရင်​ မိုးရာသီအတိုင်း တဖွဲဖွဲနဲ့ ပိုင်​ဆိုင်​မှုအစစ်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​မှုအတု​တွေနဲ့ လဲလှယ်​သွားကြ။ သတ်​မှတ်​ရက်​ထက်​​ကျော်​လွန်​မှုမှန်​သမျှဟာ ​ကြေကွဲဖို့ရာချည်း။ အိပ်​မက်​ထဲမှာ​တော့ အိပ်​မက်​မက်​တဲ့အ​ကြောင်းသာ အိပ်​မက်​မက်​​လေ့ရှိခဲ့။ ​ဆစ်​ ပွိုင့်​ တူး အပြီး။ ဘယ်​သူ ကိုယ့်​​လောက်​ ​ကြေကွဲခဲ့ပါလိမ့်​။
ည ၁၁နာရီ ၅၉မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 11:26 PM No comments:
​ခေတ်​ မလွန့်​တလွန်​ ရုပ်​ရှင်​
မြို့ပြ၏ မိုးရာသီ​နောက်​ဆုံး​နေ့များ သီအိုရီအတိုင်း လည်​ပတ်​​နေပုံသည်​ ယန္တရား ဆန်​ဆန်​
တကယ်​က အရာအားလုံး ယန္တရား ဆန်​ခဲ့ကြသည်​ပဲ မဟုတ်​လား။
​လှောင်​​ပြောင်​ရယ်​​မောစရာများ၊ စိတ်​ညစ်​ညူးဖွယ်​ရာများ ပြီးသည့်​အခါ ကြည်​နူး​နွေး​ထွေးမှုများ ထီးတစ်​​ချောင်း​အောက်​တွင်​
ဧရာဝတီမြစ်​ကို မြင်​ရသည့်​အခါ အ​တွေး​များ ကျယ်​ပြန့်​ရှည်​လျားရပြီး
မြစ်​ကမ်းနံ​ဘေးတွင်​ ထိုင်​ရင်း ဖြတ်​သွားဖြတ်​လာများကို ကြည့်​ရသည့်​အခါ အမြင်​​များ ကျယ်​ပြန့်​ရှည်​လျားရ၏။
မြစ်​တစ်​စင်းကို ​ခွေလိပ်​ထိုးသိပ်​ ထည့်​ထားခဲ့​သော စာအုပ်​​ဟောင်းများ၊စာရွက်​အတိုအစ အ​ဟောင်းများ ရှိခဲ့ပြီ မဟုတ်​လား။
​ကောက်​ရိုးမီးသဖွယ်​ စည်းစနစ်​ကျမှုသည်​ ရာသီအစများတွင်​ ဟုန်းခနဲ
အချိန်​ကို တိရိ​သေသပ်​ဖို့ ကြိုးစား​သော သူရဲ​ကောင်းတစ်​​ယောက်​၏ ဓားသည်​ ​ဟောင်း​ဆွေး တုံးတိ​နေခဲ့ပြီ မဟုတ်​လား။
ပွင့်​ဖတ်​များ​ပေါ်မှ တက်​တူးရုပ်​သည်​ ​ပေါ်ပင်​ငြိမ်းချမ်း​ရေး မဟုတ်​
အမြီးကျက်​ လျှင်​ အမြီးစားမည့်​သူ အဆင်​သင့်​ရှိ၍
​ခေါင်းကျက်​လျှင်​ ​ခေါင်းစားမည့်​သူ အဆင်​သင့်​ရှိပြီး ဖြစ်​၏
ကုသခြင်းထက်​ ကြိုတင်​ကာကွယ်​ခြင်းက ပို​ကောင်း၍
လက်​နက်​သစ်​များအပြိုင်​အဆိုင်​ထုတ်​၍ စစ်​ပွဲများ အပြန်​အလှန်​ စတင်​ခဲ့ကြသည်​ မဟုတ်​လား။
စီးပွား​ရေးဆိုသည်​မှာ အမြင်​ရှိဖို့ပဲ လို၏
အာဏာရှင်​ ဖြစ်​စရာမလို ဒုက္ခသည်​တို့၏ မျက်​ရည်​ကို ခု၍လည်း ပန်းတိုင်​​ရောက်​နိုင်​၏
ယုတ်​မာနိုင်​ခဲ့လို့ ယုတ်​မာခဲ့ပြီးကြပြီ မဟုတ်​လား။
ဗိုင်းရပ်​စ်​များ ကဲ့သို့ အဖျက်​ပိုးမွှားများ ရှိမှသာ ပဋိဇီဝ​ဆေးများလည်း ရှိနိုင်​မည်​
သူရှိမှ ကိုယ်​ရှိ အပြန်​အလှန်​မှီခို ဆက်​ဆံ ရုန်းကန်​ ဝံ့ကြွားခဲ့ကြပြီး
မိုး​ရေထဲမှာပင်​ မီးခိုးများ အူထွက်​​နေတတ်​ခဲ့ကြပြီ မဟုတ်​လား။
ည ၁၀နာရီ ၂၀မိနစ်
လမ်းမကြီးရဲ့​ဘေး ​ပေမယ့်​ ဝိုင်းစုခိုင်​သိန်းနဲ့ မ​တွေ့ခဲ့ဘူး
အဲ့ဒီ​နောက်​ ခြင်​ဟာ ​ကျောက်​​ခေတ်​ထဲ ပျံ​ပြေးဝင်​သွားတယ်​
အသဲကွဲပုံစတစ်​ကာကပ်​ထားတဲ့ အကျိင်္ီဝတ်​ထားတဲ့ ​ကောင်​​လေးဟာ ​စီးကရက်​ကို​ နောက်​ဆုံးအကြိမ်​အဖြစ်​ ရှိုက်​ဖွာပြီး
မီးခိုး​ငွေ့​တွေထဲမှာ အတိတ်​ကို ရှာတယ်​
သုဓမ္မာလမ်းမကြီးမှာ ဘယ်​နံပါတ်​ကို ​စောင့်​ရမလဲ မ​သေချာဘဲ ​စောင့်​​နေခဲ့တာလည်း
မ​နေ့က ​တွေ့လိုက်​တဲ့ ဂျာနယ်​ထဲမှာ ၂၁ရာစုရဲ့ ပင်​လုံညီလာခံ​တောင်​ ကျင်းပ​နေခဲ့ပြီ
မိုးတဖွဲဖွဲကျလာ​တော့ မိုးအတု​တွေအ​ကြောင်း ကဗျာကို သတိတရ
အဲကွန်းဘတ်​စ်​ထဲက အ​အေးဓာတ်​နဲ့ အပြင်​ဘက်​က ရွာ​နေဆဲ မိုးပုံရိပ်​ဟာ သဟဇာတဖြစ်​ခဲ့ပြီး
လက်​​တွေ့မှာ​တော့ ဘယ်​​တော့မှ လက်​​တွေ့မရှိလှဘူး
ပိုကီမွန်​ဂိုးထဲက အ​ကောင်​​တွေ​ကော မိုး​ရေထဲမှာပဲလား
​ကောင်​​လေးဟာ စီးကရက်​အသစ်​တစ်​လိပ်​ကို ထုတ်​​သောက်​ပြန်​တယ်​
ပရိုဂရမ်​တစ်​ခု run ​နေသလို ကားမျိုးစုံ အရှိန်​ပြင်း အရှိန်​​လျှော့ ရပ်​တန့်​ အရှိန်​ပြန်​တင်​
အမှိုက်​​တွေသွန်​သလို သွန်​သွားလိုက်​ အမှိုက်​​တွေသိမ်းသလို သိမ်းသွားလိုက်​
ရုပ်​​ပေါက်​​နေတဲ့ ခရီးသည်​တင်​ဘတ်​စ်​ကား​တွေဟာ အကြည့်​တစ်​မျိုးနဲ့ကြည့်​သွား အလျင်​တစ်​မျိုးနဲ့ ကြည့်​သွား
စပ်​ကြား..နိုင်​တီတူး..ဂျမ်း...ယူဦးမလား အစ်​ကို ကွမ်းယာသည်​​လေးက​မေး​တော့
မင်းအသက်​ ဘယ်​နှနှစ်​လဲလို့ ခပ်​ချာချာ ပညာ​ပေးဇာတ်​လမ်း​တွေထဲကလို ပြန်​မ​မေးမိဘဲ ငါ ကွမ်းမစားဘူးလို့ ခပ်​ပြတ်​ပြတ်​ ပြန်​​ပြောပြီးမှ တစ်​မျိုးတစ်​မည်​ ဖြစ်​ရပြန်​တယ်​
​ကောင်​​လေးက​တော့ နိုင်​တီတူး တစ်​ထုပ်​​ပေး ဆိုပြီး ပိုက်​ဆံထုတ်​တယ်​
အဲ့ဒီ​နောက်​ ခြင်​ဟာ ​ကျောက်​​ခေတ်​ထဲ ပျံ​ပြေးဝင်​သွားတယ်​။
နံနက် ၂ နာရီ ခန့်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:35 PM No comments:
မင်းတို့ရဲ့ သစ္စာတရား ငါ့ဆီမရောက်ဘူး...အားတီတို့
ငါ့ကို အခု ပြောပါ
ငါ့ကို အခု ထပ် ပြောပါ
ငါ့ကို အခု ထပ် ထပ် ပြောပါ
ငါ့ကို အခု ထပ် ထပ် ထပ် ပြောပါ
ငါ့ကို အခု ထပ် ထပ် ထပ် ထပ် ပြောပါ
ငါ့ကို အခု ထပ် ထပ် ထပ် ထပ် ထပ် ပြောပါ
ည ၁၀ နာရီ ၁၁ မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:33 PM No comments:
ဖန်သေတ္တာထဲ ထည့်ထားလိုက်တော့ ရုပ်ရှင်တွေထဲက တန်ခိုးရှင်ရောက်လာသလိုမျိုး
မကြည်လင်တဲ့အခါ အလင်းရောင်ဟာ မြားဦးချွန်နဲ့ မျက်လုံးကို ထိုးစိုက်နေသလိုမျိုး
(တကယ်က အဲ့ဒီလောက်မဆိုးပါဘူး )
တွေးနေတဲ့အတွေးတွေဟာ အလင်းရောင်ပျံသန်းရာ လမ်းတလျှောက်
မှာထားတဲ့ ဒဿနစာအုပ်ဟာ အခန်းနံပါတ်မှားပြီး နေ နေလိုက်တာ အလင်းရာသီကုန်တဲ့အထိ
ဝီစကီနှစ်ပက်ထည့်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်ကို အလင်းရောင်မှာ ကိုင်မြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
တဏှာရာဂဟာ ဟုန်းခနဲ ထ တောက်လာလို့ ဂွတ်ခနဲ မော့ချပစ်လိုက်ရ
လမင်းကြီးရဲ့ အလင်းရောင် ခမ်းတဲ့အထိ
စပျစ်သီးအချဉ်တွေဟာ အလင်းရောင်ထဲမှာ မက်မောဖွယ်ရာ
အလင်းရောင်ကိုမြင်တဲ့အခါ အမှောင်ကို သတိရတတ်သလိုလို ရှိနေတတ်သေး
ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့
ဘာလင်တံတိုင်းကို အလင်းရောင်ထဲမှာ အထင်အရှား။
ည ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:30 PM No comments:
ကော်ဖီထက် အရသာပိုတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ခေတ်အကြောင်း
သာမညစကားတွေ အခြေအတင် ဆွေးနွေးနေကြတယ်
နံရံနဲ့ မျက်နှာကြက်က အလင်းမှိန်မှိန်ဟာ စွဲမက်ယစ်မူးဖွယ်
တိုင်ပေါ်က နာရီဟာ အနားမနေဘဲ ပုံမှန်ရွေ့နေခြင်းကို ဘယ်သူတရားကျကြမလဲ
မုန့်ချို အချို့ကို ကိုက်ဝါးရင်း ဆီးချိုရောဂါအကြောင်း အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးနေသူ
အသက်ငါးဆယ်ကျော်တို့ခဗျ ဘယ်ခရီးမှ မနီးနေသလို အထာအပြည့်
စမတ်ကျကျဝတ်ဆင်ထားတဲ့ စားပွဲထိုးလေးဟာ စားပွဲဝိုင်းတွေကို မျက်ခြေမပြတ် လှည့်ပတ်
ကြည့်တော့ကြည့်တယ် မမြင်ဘူး အထာအပြည့်
သေသပ်ကျနစွာ ခေါက်ချိုးထားတဲ့ တစ်ရှူးစက္ကူ တစ်သိုက် ပျင်းရိငိုက်မြည်းနေကြသလို
ကောင်တာက မန်နေဂျာ အမျိုးသားကြီးဟာ ဝင်ပေါက်ကို အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ငေးကြည့်နေသလို
မီနျူးစာအုပ်ကို တစ်ရွက်ချင်းလှန်ရင်း ကိုယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးအရ စီးပွားရေးအရ ဓာတ်မတည့်တဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို ရှောင်ရှားနေတဲ့ လက်တွေ ခပ်လေးလေး လှုပ်ရှားနေကြသလို
ရေနွေးတစ်အိုး အရင်ပေးကွာ...မိတ်ဆွေကို စောင့်လိုက်ဦးမယ်
အဝင်တံခါးမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ကဒ်ကလေးကို ဆိုင်ထဲကနေမြင်နေရတာကတော့
နံနက် ၉ နာရီ ၂၉ မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:29 PM No comments:
တိတ်ဆိတ်သံဟာ လမ်းမပေါ်မှာ တွားသွားနေ
အရိုင်းစိတ်ရဲ့ အနံ့ဟာလည်း တစ်လွှာချင်း မှိုင်းဝေလာ
လျှောက်နေတဲ့ ခြေထောက်ဟာ ခြေသံကို မြုံထား
မြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေဟာ စိတ္တဇရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် ခြောက်ခြားဖွယ် ဖြစ်နေတယ်
အားလုံးရဲ့မြို့တော် သို့မဟုတ် မြို့တော် အားလုံး
အားလုံးက မြှောက်တင်ထားလို့ ကောင်းကင်အမြင့်မှာ ဝဲနေသူ နာမည်ကျော်များ
စိတ်မလာတဲ့အခါ အားလုံးက ဆွဲချဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ နာမည်ကျော်များ
နာမည်ကျော်တွေကို မကြိုက်တတ်ရင် အစကတည်းက နာမည်ကို အကျော်မခံဖို့ကောင်းတယ်
စိတ်ထဲမှာပဲ သိုသိပ်ဝှက်ကွယ်ထားတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ကျင့်ကြစမ်း
မခြုံလို့ မလုံဘူး သီလကိုယ်ကျင့်တရားများစွာ
ဘာသာစကား ဘေးကျပ်နံကျပ် ခေတ်ထဲ ချစ်စကားများ အဆန်းတကြယ်
အမုန်းစကားများ အံ့ချီးဖွယ် ဖွံ့ထွားဝဖီးလာကြ အက်ဖ် စတား စတား ကေ
ဖတ်နေသတင်းခေါင်းစဉ်ကအစ ကမ္ဘာအနှံ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ တိုးတက်လာနေတယ်
တဝုန်းဝုန်း စည်ကားပြီးမှ တိတ်ဆိတ်သံဟာ ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း ခြောက်ခြားရပြန်။
ည ၁၁ နာရီ ၂၁ မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:25 PM No comments:
အခြားသူတို့ရဲ့အကြောင်းဟာ အကြောင်းမဟုတ်တဲ့ နေ့
ဝေဝါးခဲ့သမျှ လင်းထင်းဖို့ မသေချာသည့်တိုင်
စာရွက်ပေါ်မှာ စကားလုံးအချို့ အထင်အရှား
နောက်ဆုံးပေါ် အရည်မရ အဖတ်မရတွေကို
ခွင့်လွှတ် နားလည် စိတ် ပွင့်ဝေခဲ့
ဘယ်သူမှ မထွန်းညှိဘဲ လင်းခဲ့
ဘယ်သူမှ မမှုတ်ငြှိမ်းဘဲ ငြိမ်းခဲ့
ပီပီသသ တွေးခေါ်မိခဲ့တဲ့ ညနေခင်း
တစ်ခဏ နဲ့ တစ်ဘဝစာ ရနံ့တွေ ပျံဝဲခဲ့တယ်
ခေတ်သစ်တစ်ခု အဓိပ္ပါယ် ဖော်ထားတယ်
၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:22 PM No comments:
မကိုင်တွယ်ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ စာရွက်များကို ညက အိပ်မက် မက်တယ်
မမြင်ရတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ကြားနေရတဲ့ ကြားနေကျ အဓိပ္ပါယ် ဝိုးတဝါး များ
ရန်ကုန်မိုးလို တဝေါဝေါ တဖွဲဖွဲ အုံ့သည်း တိုးဝင်
ခေါက်ထားတဲ့ စိတ်ကူးကို လွယ်အိတ်ထဲ အလျင်စလို သိမ်းလိုက်ရတယ်။
အမှတ်တရများကို တေးမှတ်ထားခြင်း အချက်အလက်
အစီအစဉ် မကျမှုများဟာ စိတ်ရဲ့ ပုံရိပ်စစ်ဖြစ်တယ်
ချိုးထားတဲ့ စက္ကူ ရုပ်တွေဟာ စိတ်ထွက်ပေါက်
စက္ကူ ရုပ်တွေ ဘယ်ဆီ ပြေးထွက်သွားကြသလဲ ပျံသန်းသွားကြသလဲ
လွမ်းစိတ်ကို တေးမှတ်ဖို့ရာ စာရွက်များဟာ အနားကို မရောက်လာနိုင်ကြသလား.. လာရောက်ခွင့်မရှိခဲ့ကြသလား
အနံ့အသက်တွေဟာ အနီးအဝေး ကစားကောင်းနေတုန်း။
စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေ ပုံရိပ်ဖော်ဖို့ စာရွက်ဖြူတစ်ရွက်လောက်ဆို လုံလောက်ခဲ့မလား။
၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:20 PM No comments:
ထိုနေ့က ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဝါကျများ ငလျင်ထဲ ပါသွားသည်
အနာတရ ဝေဒနာအဖွဲ့အနွဲ့များ လှိုင်လှိုင်ပွင့်ခဲ့ကြသည်
မြန်မာသဒ္ဒါကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ လမ်းခုလတ်တွင် လုပ်ကြံခံလိုက်ရသည်
ဝါကျတုများ ဝတ်စုံသစ်ဟုခေါ်သော အရေးအသားအဟောင်းများကို ဝတ်စုံပြည့် တူညီဝတ်ခဲ့ကြသည်
ဝါကျတုများသည် ဘဝတုများကို စုစည်း၍ ပါတီထောင်ကြသည်
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဝါကျများ၏ သမိုင်းပုံရိပ်များကို အစဖျောက်ပစ်ခဲ့ကြပြီးနောက်
ယနေ့ သင် ရေးသားဖတ်ရှုသမျှ အရာရာဟာ
ထိုနေ့က ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဝါကျများ ငလျင်ထဲပါပြီးသည့်နောက်ပိုင်း
ဝါကျတုများ၏ ဝါကျတုများ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း။
ည ၇ နာရီ ၃၆ မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:18 PM No comments:
ငါတို့ခေတ်က သီချင်းတွေ နားထောင်တယ်
ငါတို့အနာဂတ်အကြောင်း ဖွဖွလေး စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တယ်
ဝရန်တာ ထွက်ပြီး အိပ်တန်းပြန်ငှက်တွေကို မျှော်ငေးတယ်
ဘယ်တော့မှ အတ္တ မီးမတောက်ဘူး
ငါရဲ့အချစ်ဟာ အပူငွေ့ပျပျလေးနဲ့ ဖြူစင်အေးချမ်းလျက်ရှိတဲ့အကြောင်း။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:15 PM No comments:
ရွှေပေါက်ကံက အခန်းထဲမှာ သီးနေကြ ပွင့်နေကြ
မယုံမကြည် သက္ကရာဇ် အခိုးအငွေ့များ ဘယ်ကောင်းကင်ဆီသို့
လမ်းဟာ မဖောက်ဘဲ ပေါက်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီနေ့တွေကို ကဗျာမဆန်တဲ့ ကဗျာနေ့များလို့ သတ်မှတ်တယ်
ဟမ်ဘာဂါကြားမှာညပ်နေတဲ့ ဝက်တစ်ကောင်ဟာ ဒီမိုကရေစီကို တောင့်တသလိုမျိုး
အဖွင့်အပိတ်တိုင်းမှာ တကျွီကျွီမြည်နေတတ်တဲ့တံခါးဟာ ဓမ္မ
အစဉ်တိုင်း လိုက်နင်းထားတဲ့ သူသူငါငါ ဝေဒနာပတ်ပျိုးများ
ထိုစာရွက်များဟာ ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲစေတယ် ဘဝကို ပြောင်းလဲစေတယ်
ပတ်လည်ရိုက်နေတဲ့ သီချင်းစာရင်းထဲမှာ ကိုယ်သိပ်မကြိုက်တဲ့အဆိုတော်ရဲ့ ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်း တစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်
စကားလုံးနွံအိုင်ထဲမှာ တစ်ဘဝလုံးကျွံနေခဲ့ပြီးပြီမို့ ငါ၏ချစ်လှစွာသော စန်ဒီလည်း ခွင့်လွှတ်
အခုပဲ သီချင်းနားထောင် အခုပဲ ကဗျာရေး အခုပဲ အင်ဂျင်နီယားရင်းဘုတ်အုပ်ကို ဖတ်
အခုပဲ လွမ်းတမြမြ စိတ်နုထွေးတွေ တယုတယ ထိုင်ကြည့် အခုပဲ တရုတ်ပြန်လက်ဆောင် မျှော်
နေ့များပေါ်မှာ ဝဲအုပ်နေကြ နယူးစ်ဖိဒ် ၁၈+ အကြမ်းစား မိုးကြိုး လျှပ်စီးများကို ထိတ်တလန့်လန့် စတေးတပ်များကို ထောက်ခံမဲပေး
မပြောတော့ဘူး အနည်းဆုံး အဖြစ် စတစ်ကာလေးတောင် မပေးတော့ဘူး
ဒေတာပိတ်ပြီး ၂၁ ရာစုအစပ်က စာအုပ်တစ်အုပ်အုပ်ကိုပဲ ဖတ်ချင်လျက်။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:14 PM No comments:
မြင်သိစိတ် အမှတ်မှားမှုတွေ တစ်သီတစ်တန်းကြီး ချရေး
စက္ကူ ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ခဏပျက်ခဏ ဆိုရှယ်နက်ဝက်ဘ်ပေါ်မှာ
စိတ်ညစ်တယ်တို့ ပျော်တယ်တို့ တစ်တို့ပြီး တစ်တို့ ဟင်းလျာတွေမြည်းစမ်း
အမြင်နဲ့ပဲ အနီးအနားမှာ ဒီဆိုင်ပဲ ဟင်းလုပ် ဝယ်နေရတော့
အရောင်တင်ဆီတွေနဲ့ရဲတက်နေတဲ့ ရှမ်းတရုတ် ငရုတ်သီးစားထားတဲ့ရုပ်နဲ့
ကိုယ့်လက်ထဲက လောဘ ကိုယ် ပြန်ပြီး မြင်ပြင်းကပ် ဒေါသပါလာရ
စကားလုံးချို့တဲ့မှုကနေ ထစ်အပြီး ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ချိန်နဲ့
မိုးသည်းသည်းရွာလို့ ဆူညံသွားချိန် ရောကြိတ်
ချောလဲရောထိုင် အလှူထမင်းဝိုင်းများမှာ မချစ်ခင်မနှစ်သက်ရတဲ့မျက်နှာများကို မေ့ထား
အစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သမျှ ရိုးရာအမွေ သဖွယ် ဆက်လက် ယုတ်မာရမှာ လိုလို
တစ်စက်စက် ယိုနေတဲ့ ရေလှောင်သံကန်ဆီက ချစ်ခြင်းဖွဲ့ဂီတသံသဖွယ် ရေကျသံ
မတွေ့ချင်လောက်အောင် တွေ့နေခဲ့ရပြီးသည့်တိုင် ချစ်သူခင်သူတွေဟာ တွေ့လို့်မဝနိုင်။
နံနက် ဝ နာရီ ၃၃မိနစ်
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:13 PM No comments:
တသည်းသည်းနဲ့ ချွေးစို့နေရချိန် မိုးရေစက်တွေကြား
အားတိုင်းယားတိုင်းတော့ ရွာနေတဲ့ မိုးတော့ဟုတ်ပုံမရပါဘူးဆိုပြီး
ဦးထွန်လွင် နံရံကို ဝင်ဖတ်ပြီး မုန်တိုင်းရှာကြည့်ရ
ပြတ်ရွေ့ကြောင်းပေါ်က စကားလုံးတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမျိုး
လည်နေတဲ့ နာရီလက်တံအဖျားက အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ဖွားလျားလွင့်
စိတ်ရှိလက်ရှိလျှောက်ပစ်သည့်တိုင် ခရီးဟာ တိုဝင်မသွား
မျက်နှာဖူးယောင်ပြီးတော့ ဝမ်းဗိုက်ပူလာမယ့် မြစ်မိခင်ကြီရဲ့ သတင်းပုတ်သံ
လွှင့်တင်လိုက် လွှင့်တင်လိုက် ဆေးကွဲတာလိုလို ကျပ်မပြည့်တာလိုလို
နောက်ပြောင်ခြင်း စိတ်ရင်းအမှန်တွေ ရှယ်ကြ ကွန်မန့်ပေးကြ ရဲရဲတောက် စိမ်းစိမ်းထ
ဝေဒနာဟာ ရှုနေရင်းက အတိတ်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါ
အနာဂတ်တွေ ပူပန်စိတ်ကလည်း ခုန်ပေါက် ဆော့ကစား
ပိုကီမွန်ဂိုးနဲ့အတူ ငါ့တည်နေရာကိုရှာကြ အလုံးလိုက်ပစ်ပေါက်ကြ
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို မဲမပေးစေချင်ရင် ငါ့ကို တစ်ဒေါ်လာ ပေးကြ
မထူးချွန်ချင်တဲ့အခါ ကားကြပ်တာကို ဝမ်းသာအကြောင်းပြချက်ပြ
တစ်နယ်စီဝေးတဲ့အခါ သတိရစိတ်ကို ပြန်ထုတ် ပြီးတဲ့အခါ
မတူပေမယ့် အတူတူပါပဲကွာ လို့ လေးလေးပင်ပင်ပြောပြီး
ဘီယာလက်ကျန်ကို ပါးစပ်ထဲ သွန်ပစ်ချလိုက်တယ်။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:06 PM No comments:
ကိုယ်က တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲ နာကျင်တတ်တဲ့သူ
ဝေဒနာစကားတွေဟာ နှစ်ခြောက်ဆယ် ကျော်တဲ့အထိ
လန်းမြဲ လန်းဆဲ ခိုက်ဆဲ လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ ကံကောင်းမှုတစ်ခုလို
အော်ဟစ် ညည်းညူခဲ့ကြ ဆုတံဆိပ်တွေ ရတဲ့အထိ သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်တဲ့အထိ
ဂူဂဲလ်မြေပုံမှာ ညွှန်းဆို ပြနေတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ဟာ လမ်းဖြတ်ကူးတိုင်း ဖုန်းလာတယ်
ဖတ်လက်စ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ကြီး ပြီးဆုံးသွားမယ့်နေ့ဟာ
အပိုင်းပိုင်းအစစ ဒိုင်ယာရီ မှာ ရိုက်သွင်းထားချင်ရဲ့
သစ္စာလမ်းဟာ ကိုယ်နဲ့အကျိုးပေးသန်တဲ့ လမ်းအမည်သက်သက်သာဖြစ်ခဲ့ပြီး
ပူအိုက်လာတဲ့အခါ ရှေးဟောင်းလေအေးပေးစက်ကြီးကိုပဲ နားညည်းခံပြီးဖွင့်ရ
ရွာနေတဲ့မိုးအတုတွေကိုပဲ စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆဲရေးပစ်လိုက်မိတယ်။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:04 PM No comments:
ဘဝအကြောင်း အသံထွက် မရွတ်ဆိုနိုင်ခင် ရှင်သန်မှုကို စာလုံးပေါင်းမှန်အောင် မရေးနိုင်သေးတဲ့ လူများရယ်၊ငါ ရယ်
မရယ်ခဲ့ဘူး။ ပြက်လုံးဟာ ကမ္ဘာကျော်တယ်ဆိုရင်တောင် မရယ်ခဲ့ဘူး။
စိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်းနေမိသမျှ ပေါင်းမြက်တွေသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ထကြွ ဖွံ့ထွားလာ
ရေဒီယို သီချင်းတစ်ပုဒ်စာ ငါ လွမ်းနေတတ်မြဲ
ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ပြုံးဖြီးရောက်ချလာတဲ့ မိုးရေစက်များ
မရေးတော့ဘူးလို့ အားတင်းထားလည်း ရောက်လာခဲ့တာပဲ
အသံဟာ အက်ကွဲပြီးတဲ့နောက် ပျောက်ကွယ်သွားဖို့
နေ့စဉ် ခရီးတိုများနဲ့ပဲ အချိန်ဟာ အငွေ့ပျံခဲ့
ငါ ဘယ်ရောက်နေလဲ ငါ မေးနေသမျှ ငါ ပြန်မဖြေနိုင်ဘူး။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 11:00 AM No comments:
အံလွဲနေတဲ့ စာကြောင်းတွေလို ပစ္စုန်ပ္ပန်
ပျောက်သွားတဲ့ ကားလက်မှတ်ဟာ လေလွင့်ပြီး
ခေတ်ရဲ့သောကတွေနဲ့ ဝေးရာကို ပြေးနေရ။
၈ သြဂတ်စ် ၂၀၁၆
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:59 AM No comments:
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:57 AM No comments:
အလံမလဲမီ နောက်ဆုံးပွင့်ထွက်သွားတဲ့ ကျည်ဆံ
ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း အလျဉ်းမရှိ ။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:56 AM No comments:
လွယ်တယ် ခက်တယ် ပစ္စုန်ပ္ပန် မီးပွင့်များရယ်
မပြောခင်က ဖူးပွင့်နှင့်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ချစ်စရာများရယ်
လေဟာ လမ်းလျှောက်သူလို သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း ပွေ့ချီလာခဲ့
ဒါဟာ ဇာတ်သိမ်းကောင်းတစ်ခုပဲလို့ တုန်တုန်ရီရီမြည်ထွက်လာတဲ့
ဘယ်သူ့နားရွက်ဖျားဆီကိုမှ မချိတ်မိဘဲ အငွေ့ပျံသွားခဲ့တယ်။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 5:07 AM No comments:
မဟောင်းခင် အဟောင်းတွေအကြောင်း အသစ်ပြန်ရှာ။
ချန်ခဲ့တယ်။ စိတ်ခြစ်ရာတွေ။ ရုပ်ကြွရာတွေ။
မမျှော်လင့်ခြင်းကို ဒီနေရာမှာ အသားပေးဖို့ စိတ်မလာတော့တဲ့အခါ
မြို့တော်အကြောင်း။ တောရွာအကြောင်း။ စာလုံးပေါင်းဖို့ သီလသမာဓိဟာ မပြည့်စုံခဲ့ပြန်ဘူး။
နာရီထဲမှာ ရွေ့နေဆဲ ။ ကိုယ့်စိတ်ဟာ အရောင်ဖျော့ဖျော့တွေမှာ ငြိတွယ်တယ်။
စက္ကူပေါ်မှာ မရေးခြစ်မိသမျှတွေ ။ မိတ်ဆွေအကြောင်း ပြန်စဉ်းစားတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ဟာ အခု ကိုယ်နဲ့ မင်နီမျဉ်းပိတ်ခံထားရသလို။ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲမှာ ထည့်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား။
နားထောင်နေကျ သီချင်းတွေ နားယဉ်မလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ။ တူရိယာတစ်ခုခု ။
မတီးတတ် မဆိုတတ် မအော်တတ် မဖောက်ခွဲတတ်တဲ့ ပုရွက်ဆိတ်သာသာ။
ဒီအထဲမှာ ဘာရှိသလဲ လာရှာသမျှ ကိုယ်ကျိုးနည်း ပြန်ရဖို့ချည်း။
ဘာမှမရှိခြင်းတွေအကြောင်း အများကြီးရှိအောင် ရေးခဲ့သမျှ ။ ဘာမှမရှိတော့ဘူး။
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်သည်ဖြစ်စေ။ လူသားစိတ်ဆန္ဒ ဖောက်ပြန်သည်ဖြစ်စေ။
ဖောက်ပြန်မှ ပြောင်းလဲတာ မဟုတ်ဘူးလို့ စကားပြေတစ်ပုဒ်ထဲ ထည့်ရေးဖို့ တေးမှတ်ထားတယ်။
ချန်ခဲ့တယ်။ ကြောင်းကျိုးညီညွတ်မှု အကောင်းတရားမှန်သမျှ။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:34 AM No comments:
ငါ့လက်ထဲက ဘောလ်ပင်လေးဟာ လှုပ်ကာ လှည့်ကာ...။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:32 AM No comments:
မြန်မာပြည် မြောက်ဖျားက ကျောက်စရစ်ခဲလေးရယ်
မြန်မာပြည် တောင်ဖျားက ခရုခွံလေးရယ်
အရှေ့ဘက် ကုန်းပြင်မြင့်ဆီက ရေတံခွန်းလေးရယ်
အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းက ကျွန်းစုလေးရယ်
နံနက်ခင်း နေရောင်ခြည်မှာ နွေးထွေးခဲ့တယ်
ညကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေကို ရေတွက်ခဲ့တယ်
အတူတကွ ရှိခဲ့သလားဆိုတော့ မရှိခဲ့ဘူး
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:31 AM No comments:
ဘယ်လို ကျစ်လျစ်မှုနဲ့ ရွေ့လျားရမယ် ငါ တွေးတယ် ငါတို့ တွေးတယ်
ငါ တွေးတယ် ဒါကြောင့် ငါ ရှိတယ်လို့ ဒေးကား ပြောခဲ့လို့
ငါ တွေးနေလျက်က ငါ မတွေးတော့ဘူး
အတွေးဟာ ပေါင်းမြက်ပဲ လို့ ငါ မကြာခဏ ညည်းတွားနေကျ အတိုင်း
ငါဟာ ပေါင်းမြက်ထဲမှာ ပျော်မွေ့နေတဲ့ အင်းဆက်တစ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့တယ်
ငါ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး ငါတို့ အတူတကွပေါ့
သရဲတွေ ဘယ်လို လောဘမုန်တိုင်း ထန်ကြောင်း သိခဲ့ပြီးပြီလား
ဘီလူးတွေ ဘယ်လို စည်းမစောင့်ကြောင့် သိခဲ့ပြီးပြီလား
နတ်ဆိုးတွေ ဘယ်လို ကောက်ကျစ်ကျိန်စာ မန္တန်တွေ ချတတ်ကြောင်းသိခဲ့ပြီးပြီလား
မြေခွေးတွေမှာ ဘယ်လို စွမ်းအားတွေ ပြည့်ဝနေကြောင်း သိခဲ့ပြီးပြီလား
ဗီလိန်တွေဟာ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ကျဆုံးခန်း မရှိတဲ့အကြောင်း သိခဲ့ပြီးပြီလား
မကောင်းဆိုးဝါးဇာတ်လမ်းတွေမှာ ပြေးလွှားအသက်ရှင်နေရတဲ့ ဇာတ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီလား
မှန်တယ် မှားတယ် ပြောဖို့မလိုအောင် လောကကြီးက သူ့တရားနဲ့သူ လှနေတုန်း
အများပိုင် လမ်းမကြီးမှာ အများပိုင် အတွေးတွေ မတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ လူသားမျိုးစိတ်တွေနဲ့
ကိုယ့်အတွေးမှ လှတယ်လို့ မတွေးမိခဲ့တာလည်း ကြာခဲ့ပြီ
လမ်းသစ်မှာ လမ်းဟောင်းက လူတွေနဲ့ပဲ တွေ့နေရတဲ့ ကံကြမ္မာက နည်းနည်းတော့ လွန်သွားပြီလို့
ငါတို့ ဖေ့ဘွတ်မှာ စတေးတပ်တွေ စိတ်မပါလက်မပါ တင်နေကြ
ရယ်ပြီးသား ဟာသတွေ ပြန်ဖတ်ပြီး ပြန်ရယ်နေကြ
ခံစားပြီးသား ဇာတ်လမ်းတွေ ပြန်ဖတ်ပြီး ပြန်ခံစားနေကြ
လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ နေ့စဉ် ရန်ဖြစ်မြဲ ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြ
ထုံအနေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ နေ့စဉ် ဆဲဆိုမြဲ ဆိုဆဲနေခဲ့ကြ
ဘယ်သူမှ မတွေးဘဲ မိတ်ဖွဲ့ကြ
ဘယ်သူမှ မတွေးဘဲ ပြတ်ဆဲကြ
ဘယ်သူမှ မတွေးဘဲ ချစ်ခင်ကြ
ဘယ်သူမှ မတွေးဘဲ မုန်းတီးကြ
ဘယ်သူမှ မတွေးဘဲ ချီးမွမ်းကြ
ဘယ်သူမှ မတွေးဘဲ ရှုံ့ချကြ
ဘယ်သူမှ မတွေးဘဲ အချိန်တွေ ပျော်ပျော်ကြီး ဖြုန်းတီးကြ
ဘယ်သူမှ မတွေးဘဲ တွေးခဲ့ကြ
စိတ်ကူး သေ ကြီးတွေ ဒရွတ်ဆွဲရင်း....။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 2:20 AM No comments:
လူတစ်ယောက်၏ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းအပ်သော (လူမြင်ကောင်းသောလူကြားကောင်းသော) အရာများကိုစစ်ထုတ်ကြည့်လိုက်သောအခါ အေဖိုးစာရွက်တစ်ရွက်စာပင် မရှိကြောင်းအံ့သြကြီးစွာတွေ့လိုက်ရသည်။ အက်စစ်လောင်းခံရသောစိတ္တဇနေ့ရက်များသည် နွေရွက်ကြွေတစ်ရွက်ထက် မပိုခဲ့။ စာရင်းပေး၍တန်းစီစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုအပ်သော်လည်းထိုပန်းပွင့်လေးသည် ကျွန်တော်နှင့် ဝေးကွာလွန်းနေပါ သည်။ ပင်လယ်ပြင်တွင် ကျဲပက်ထားသောလရောင် ပင်လယ်တစ်ခုစာကို ကျွန်တော် နှမြောတသဖြစ်မိသည်။ ထိုပင်လယ်ထဲသို့ ကြွေကျခဲ့သော ကြယ်စင်တို့၏ အရိုးစုကို ကျွန်တော် သနားမိပါသည်။ ထို့အတူအစဉ်အမြဲလည်းဦးညွတ်ခဲ့ပါ သည်။
အခါလွန်မိုးများကို ကျွန်တော်မုန်းတီးပါသည်။ ကျွန်တော်နှင့် အခါလွန်မိုးတို့ သွေးထွက်သံယို ဖြစ် သည်အထိသတ်ပုတ်ရန်ဖြစ်ဖူးသည်။ အရက်ဖြူပုလင်းထဲမှ အမှန်တရားကိုရှာရင်းယုတ္တိဗေဒနယ်ပယ်၏ အပြင်ဘက် သို့ ရောက်နေသော ကျွန်တော်၏ စိတ်ကို ပြန်လည် ဆွဲဆောင်ခဲ့ရပါသည်။ လွဲချော်မှုများကိုအပြစ်မဆိုလိုပါ။ မိုးကိုမိုးဟုသာသတ်မှတ်ပါ။ ည ကိုညဟုသာသတ်မှတ်ပါ။ နံနက်ခင်းများတွင် မပွင့်ဝေသော ပန်းများကိုထည့်မတွက်ပါနှင့်။
ချစ်ဦးသူများကိုတမ်းတတတ်သူများအတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ် ရှိသည်။ ဘ၀တွင် ကွမ်းယာထက် ပို၍ အရေးကြီးသော အရာများ များစွာ ရှိပါသည်။ လူနှစ်ဦးသာ သိခဲ့သော လမ်းကျဉ်းလေးတစ်ခု ရှိပါသည်။ လူနှစ်ဦးသာ သိသော နှစ်ရှည်သစ်ပင်တစ်ပင် ရှိပါသည်။ လူနှစ်ဦး၏ ရနံ့များ စွဲထင်နေသော လမ်းကျဉ်းလေးတစ်ခုနှင့် နှစ်ရှည် သစ်ပင်တစ်ပင်တို့ ရှိပါသည်။ မည်သည့် ရာဇ၀င်မှတ်တမ်းမှာမှ ရေးသားဖော်ပြခြင်း မခံရသော အဖြစ်အပျက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ နှလုံးသားတို့တွင် အဆိပ်တက်လျက်ရှိသည်။ တိမ်တိုက်များဖြင့် မိုးထားသော အိမ်တစ်လုံးတွင် နေထိုင်မိ ခဲ့သော ကျွန်တော်သည် အခြားသော လူများထက် ၀ဋ်ကြွေးကြီးမားသူ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မောပန်းနွမ်းနယ်ခဲ့သော အစောပိုင်း သက္ကရာဇ်များကို ပြန်လည် ခံစားရသည်မှာ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လှပါသည်။ ဒဏ်ရာများထံမှ သွေးများ တစိမ့်စိမ့် ယိုလျက်ရှိသည်။ အမှန်ကို မမြင်ခြင်း မောဟများ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ကျွန်တော်၏ အိမ်ရာမှာ လမ်းဘေးဓာတ် တိုင် ဖြစ်နေခဲ့သည်။
သက်တမ်းကုန်လုနီးပြီဖြစ်သော စွဲလမ်းစိတ်များမှာ တဖြည်းဖြည်း နှင့် မှုန်ဝါးလာပါသည်။ အိပ်မက်များ ထဲတွင်လည်း မပါဝင်တော့။ လေတိုက်တိုင်း လှုပ်တတ်သော သစ်ခက်ငယ်၏ အကျင့်ကို ဘယ်အချိန်က စ ကျင့်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် မမှတ်မိတော့ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ ဖုန်းနံပါတ် လိုချင်ပါသည်။ အာဒံ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ ကို သိချင်ပါသည်။ ကျွန်တော် ပန်းသီးမကြိုက်ပါ။ ကျွန်တော် ချောကလက်လည်း မကြိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်ထံတွင် နံရိုးအပြည့်အစုံ မရှိခြင်းသည် ဇီဝဗေဒသဘောတရားတစ်ခုကြောင့်သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကျွန်တော်သတိရတိုင်း ပန်းပင်လေးကို ရေလောင်းပေးပါသည်။
ကျွန်တော်၏ရှေ့တွင် တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက် ကြွေသွားသော သစ်ရွက်ခြောက်များထဲတွင် မတ်လ၏နေ့စွဲ များ၊ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သတိရစွဲလမ်းမိသော စိတ်များ၊ ဒွိဟများ လွန်ကဲစွာပါဝင်နေသော ကျွန်တော်၏ ရှေ့ ရေး စီမံကိန်းများ၊ ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ မရနိုင်သော ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို လိုချင်တပ်မက်လွန်းသော စိတ်များ ကပ်ငြိပါ သွားသည်။ ကျွန်တော်သာသိသော အမှန်တရားများတွင် မှားယွင်းမှုများ ကြည့်မကောင်း မြင်မကောင်းအောင် ပါဝင်နေပါ သည်။ တိမ်တစ်စအတွက် ကျွန်တော်၏အသက်ကို ကျွန်တော် မနှမြောမိ။ ဖုန်မွှန်လွန်းသော ခရီးလမ်း၏ အဆုံးကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးပုံဖော်၍ မမျှော်မှန်းတတ်ပါ။
ကိုယ်ထည်မဲ့ အတောင်ပံများပေါ်တွင် မနက်ဖြန်များ အစီအစဉ်မကျစွာ တန်းစီနေကြသည်။ မုန်တိုင်း များကို မကြိုဆိုပါ။ လေပြင်းများကို မကြိုဆိုပါ။ နာမည်ကြီးနေသော ဘေးဒုက္ခမှန်သမျှကို မကြိုဆိုပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုးယုတ်မှုများကို မကြိုဆိုပါ။ ဆိုးယုတ်မှု၏ ဒဏ်ကို ပြင်းစွာ ခံခဲ့ရသော ပန်းတစ်ခင်းပေါ်တွင် လမ်းမလျှောက်ကြပါနှင့်။ လတ်ဆတ်နေသေးသော ရနံ့များနှင့်စိုလက်နေသေးသော ပွင့်ဖတ်များကို အားနာပါ။ ကောင်းမြတ်ခြင်းကို အလိုကြီးစွာ မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ မတောင်းဆိုပါနှင့်။ ကမ္ဘာကြီးနှင့် လောကကြီး နှစ်ဦးပေါင်း၍ ဖော်ထုတ်ခဲ့သော ညီမျှခြင်းများမှာ သချာင်္ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှ ညီမျှခြင်းများ၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပင် မများပါ။ ရှေးဟောင်းဂရိလူမျိုးများနှင့် ကျွန်တော် သာ သိသော ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ် ရှိပါသည်။
တစ်ချိန်က သာယာစိမ်းလန်းခဲ့ဖူးသော လမ်းကျဉ်းလေးသည် ယခုအချိန်တွင် ခြောက်ကပ်တိတ်ဆိတ်နေ သည်။ ယခုအချိန်တွင် ခြောက်ကပ်တိတ်ဆိတ်နေသော လမ်းကျဉ်းလေးသည် နောင်တစ်ချိန်တွင် သာယာစိမ်းလန်းနိုင်ပါ သည်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သူ၏အဘိဓာန်တွင် မရှိဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သော စစ်ဘုရင်၏ အဘိဓာန်ကို ကျွန်တော်ဖတ်ဖူး ချင်ပါသည်။ သူ၏အဘိဓာန်တွင် အရှုံးကို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်သိချင်ပါသည်။ သူ၏ အဘိဓာန်တွင် အရှုံးပါချင်မှ ပါလိမ့်မည်။ သေချာတာကတော့ သူ မသေခင်မှာပင် ရှုံးနိမ့်သွားပါသည်။ ဒဿနပညာရပ် များ၏ မှော်ဝင်ကကြိုးများသည် လူသားများအတွက် ညတာရှည်လွန်းသော အိပ်မက်များ ဖြစ်သည်။ နွေသည် နွေသက် သက်သာ ဖြစ်သည်။
၀ရန်တာတွင် ခိုများ လာရောက်နားနေသည်။ မဖိတ်ခေါ်ဘဲရောက်လာတတ်သော ဧည့်သည်များတွင် ငှက်များလည်း ပါသည်။ နေ၀င်ချိန်တွင် ကြေးနန်းတစ်စောင် ရောက်လာသည်။
ကျွန်တော်မသိသော အရာများတွင် အရေးကြီးတာတွေ ပါသလို ကျွန်တော်သိသော အရာများတွင် အရေးမကြီးတာတွေ အများကြီး ပါဝင်သည်။ သဘာဝ၏ ပြုလုပ်ချက်ဖြင့် နွေစစ်စစ်များကို ကျွန်တော် မကြိုဆိုလိုပါ။ ပန်းကုံးစွပ်၍ ပြုံးပြဖို့ရာ ကျွန်တော်၏ စိတ်သည် ယခုအချိန်အထိ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါ။ နာရီများအော်ဟစ်ပေါက်ကွဲ သော ညများတွင် တောတန်းမှ သစ်ပင်များလည်း ရွက်ကုန်ကြွေကြသည်။ ပန်းပွင့်လေးကို မမေ့နိုင်ခြင်းသည် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားနိုင်သော ၀ဋ်ကြွေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ချစ်စဖွယ်ကောင်းခြင်းသည် မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းခြင်းနှင့် မတူ ညီကြောင်း သူတို့ သိကြသည်။ မေ့စရာရှိတာ မေ့၍ သတိရစရာရှိတာ သတိရရင်း နေ့ရက်များကို အရေးအကြောင်း တိုးစေခြင်းသည် ကောင်းသော အိုမင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 3:57 AM No comments:
Labels: ပုံရိပ်ယောင်များ, ရသစာတမ်း, အက်ဆေး
နီတိ ကျင့်ဝတ် ဥာဏ်ပညာ အရေးအသားတွေ
အဲဒီအရာတွေ တစ်ခုမှ ကိုယ့်ဆီ ကျန်မနေခဲ့တော့ဘူး
သူတို့ ကောင်းကြပါစေ ဆိုတဲ့
ကောင်းမွန် မြင့်မြတ်သော စိတ်ထားလေးနဲ့
နှစ်သက်ထောက်ခံခြင်း ခလုတ်ကို နှိပ်ခဲ့။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 9:41 PM No comments:
ငါ့အကြောင်းကို အတိအလင်း ဖွင့်ချပြဖို့
မရှက်မကြောက် ချေးပါ သေးပေါက်က အစ
ဇူကာဘတ် ဘလူးဘုတ်ကြီးပေါ် တင်တတ်တဲ့
လူ့အန္ဓတွေနဲ့ တန်းတူး သတ်မှတ်ခံရမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်။
လျှို့ဝှက်ထားရာ မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 9:40 PM No comments:
သစ်ပင်ကြီးရဲ့ ပင်စည်က သစ်ခေါက်လေးကို အကြောင်းမဲ့ ဆွဲခွာလိုက်တဲ့အခါ
သစ်ပင်ကြီးမှာ အနာတရ ဖြစ်သွားသလား။
ပန်းပင်လေးရဲ့ သစ်ရွက်နုသစ်လေးကို အကြောင်းမဲ့ ဆွဲဖဲ့ လိုက်တဲ့အခါ
ပန်းပင်လေးမှာ အနာတရ ဖြစ်သွားသလား။
သစ်သားခုံတန်းလေးရဲ့ ကျောမှီ သစ်သားပြားလေးကို ခဲတံချွန်တဲ့ဓားလေးနဲ့ အကြောင်းမဲ့ ဆွဲခြစ်/ဆွဲဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ
သစ်သားခုံတန်းလေးမှာ အနာတရ ဖြစ်သွားသလား။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 9:39 PM No comments:
ဘာကေ တွေ ညှပ်မလဲ
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို မှုန်ရီဝိုးဝါး ရေးခြယ်
အလင်းမပေါက်ခင် မှောင်နဲ့မည်းမည်း ငါတို့ အားအင်ကုန်ခမ်း ပြန်ခဲ့ကြတယ်
ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေ မရှိပေမယ့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ကွဲခဲ့ကြ ပြဲခဲ့ကြ တစ်ချို့သူတွေရဲ့ အသံတွေဟာ ၀င်သွားခဲ့တယ်
အသံဟာ ဘယ်ထဲ ၀င်သွားခဲ့သလဲ ဘယ်သူမှ မစဉ်းစားဘဲ
၀င်နေတဲ့အသံနဲ့ စကားသံတွေ ပြုလုပ် ပြုံးပြုံးပျော်ပျော်
ခံစားချက်တွေဟာ အတိတ်ကို ပြန်ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိမရှိ
ဘီယာပုလင်းဖုံးထဲက သင့်ခ်ယူထက် တစ်ထောက်ကျပ် ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ရာကျပ်ကျပ်ဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုးတစ်ခုခုဟာ ငါတို့ကို ပိုပြီး ပျော်ရွှင်စေတယ် ပိုပြီး မူးဝေစေတယ်
ဒီနေရာမှာ ကျေးဇူးတရားရဲ့ အသုံးမ၀င်မှုဟာ ထင်သာမြင်သာရှိလာပြီး
မနေ့ညက သောက်ခဲ့တဲ့ ကော်ဖီမစ်ထုပ်ထဲက သင့်ခ်ယူ ဟာ ငါ့ကို ဆဲစေတဲ့အထိ
ငွေကြေးဟာ ဒုတိယဘုရားသခင်တွေဘာတွေ အကြီးကြီး မြှောက်စားမထားတတ်ပေမယ့်
အသက်ရှူနှုန်းကို ငြိမ်ချမ်းစေတဲ့ ဆေးဝါးတစ်ခုအဖြစ်
ဘယ်သူတွေ သယ်ပြီး ဘယ်သူတွေ ယူသွားမှန်းမသိတဲ့ ၀ီစကီပုလင်းတွေ လက်ကျန်အမြည်းတွေ ဘီယာဗူးခွံတွေ ယုံကြည်မှုတွေ အားကိုးမှုတွေ တန်ရာတန်ကြေးတွေ
အဲဒီညက ကဗျာတစ်ပုဒ်တောင် မဖူးပွင့်နိုင်လောက်အောင် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရ
ကဗျာဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ အတူ ဖူးပွင့်နိုင်ဖို့ မစွမ်းသာတဲ့ ဒုက္ခဖြေဆေးတစ်ခုအဖြစ်
ဒီကောင်တွေ မူးပြဲ ကခုန်နေပုံဟာ ဘ၀အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရေးတကြီးအရာသဖွယ်
ဒါဟာ အားလုံးအတွက် သစ္စာမဟုတ်တဲ့ အများအားဖြင့် သစ္စာတ၇ားသာဖြစ်ခဲ့
အဲဒီကာလမှာ ငါတို့ လည်ပင်းမှာ ကြိုးကွင်းတွေ သားရေလည်ပတ်တွေ မရှိဘူး
ငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာ အလကားနေ အလကားပူလောင်နေတဲ့ကျောက်တုံးမီးတောက်တွေ မ၇ှိဘူး
နောက်ကျောက ထိုးမယ့်ဓားတွေ မရှိဘူး လဲပြိုအောင်ထိုးခံမယ့် ခြေထောက်တွေ မရှိဘူး
တွန်းထိုးမယ့် လက်တွေ မရှိသလို ပြုတ်ကျမယ့် ချောက်နက်တွေလည်း မရှိဘူး
အတိတ်လှလှလေးတွေနဲ့ ရယ်သံ သန့်သန့်တွေပဲ တောက်တောက်ပပ
ဘယ်သူမှ သူများပစ္စည်းဥစ္စာ မတ၇ားလိုချင်တဲ့ လောဘ သီးပွင့်မလာသလို
ဘယ်သူမှ သူများအပေါ် မနာလိုဝန်တို ဒေါသလည်း ပေါက်ကွဲမလာဘူး
အနာဂတ်အကြောင်း မင်နက်နက်နဲ့ ရေးထွင်း မတွေးတောဘဲ ပစ္စုပ္ပန်မှာ မူးရစ်ရီဝေခြင်းနဲ့ ဒါဟာ ရံဖန်ရံခါ အနာဂတ်မေ့တတ်သူတွေ သောက်တဲ့ဆေးနဲ့ အနာဂတ်မေ့ချင်သူတွေ လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းသက်သက်
အလင်းမပေါက်ခင်တော့ ငါတို့ မှောင်နဲ့ မည်းမည်းပဲ ကုန်းရုန်း ပြန်နေကြရဦးမှာပဲ။
အကြောင်းပြချက်ကို ဘယ်သူ့ဆီက ငှားရမ်းထားပါသလဲ
ကိုယ်ကို လွတ်အောင် ရုန်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကနေ လွတ်အောင် ရုန်းလိုက်တယ်
အသွေးအသားတွေ ကြားမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ အစိုင်အခဲ သက်တမ်းရင့်တွေ
တစ်ယောက်ရဲ့ သွေးကြောထဲ တစ်ယောက်က ထိုးသွင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
မလိုလားအပ်တဲ့ အသားသေမှုတွေနဲ့ အားလုံး မီးခိုစော်နံခဲ့ကြတယ်
ထောက်ပံ့ ခံစားချက်က တစ်မည်
သီးခြား တွေ စုစည်း ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် အသံဗုံးများဖောက်ခွဲကြတယ်
မြင့်တဲ့ အပင်က လေတိုက်ခံရတယ် ပြောပြီး ခပ်တည်တည် မြင့်တက်သွား
နိမ့်တဲ့ အပင်က အနင်းခံရတယ် ပြောချိန်မရလိုက်ဘူး
မြို့က ရပ်ကွက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကို ပွဲစည်နေတော့တယ်
ဘာကြောင့် ညာကြောင့်ရယ် မသိဘူး
အားလုံး လမ်းပေါ် ရောက်နေကြပြီ။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:37 PM No comments:
ရှိတ်ထားတဲ့ ဖဲချပ်တွေကို ကံကြမ္မာလို စီပြီးတော့ သမိုင်းလို စဉ်
လေညာအရပ်မှာတော့ အချစ် မရှိတော့ဘူး ထင်။
နေခြည်ဟာ အပူလောင် နေခဲ့တာလည်း နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီမို့။
စခန်းသိမ်း မိန့်ခွန်းလေး ပြောပါဦး။
ရွေ့တယ်၊ လျားတယ်၊ အလျားလိုက် ရွေ့တယ်။
အဲဒီ နယ်နိမိတ်မှာတော့ အမှာစကားထက် အမှားစကားတွေပဲ ကျောက်ထက်မှာ အက္ခရာအဖြစ်တင်။
တစ်ကြောင်း တစ်ဂါထာ ကဗျာတစ်ပုဒ် အဆန်း။
လှုပ်ကာ လှုပ်ကာနဲ့ပဲ အဲဒီနှုတ်ခမ်းဆီက စကားလုံးတွေ လိမ့်ကျလာလေရဲ့။
ညှီစော်နံနေတဲ့ လမ်းကြားထဲမှာ နှာခေါင်းကို အရေးအရာလုပ် ပိတ်ပေးမယ့် လက် မရှိ။
ကျို့ထိုးနေတဲ့ သက်ရှိဟာ စာရေးတဲ့အခါမှာ အချို့စကားလုံးတွေ တွန့်တက်သွားတတ်တယ်။
အကြောင်းကြောင့် အကျိုး ဖြစ်တာပါပဲလေ။
စိတ်နာလို့ မရခဲ့တာ နင် ယုံစမ်းပါ …ဒါဟာ လင်းနစ်ရဲ့ သီချင်းစာသား အပိုင်းအစ။
မင်း မျက်နှာမြင်ရင် အော့အန်ချင်တယ်…ဒါဟာ Big Bag ရဲ့ သီချင်းစာသား အပိုင်းအစနဲ့ အလားတူ။
အချို့အချို့တွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေဟာ ဟောဒီ ညနေခင်း လမ်းလျှောက်ချိန်မှာ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းအဖြစ်။
ဒီနေ့ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ရဲ့။
ရမ် တစ်လုံး ဆွဲပြီး သစ်ပင်ပေါ်တက်သွားတဲ့ မျောက်လည်း အခုထိ ပြုတ်ကျမလာသေးဘူး။
မျှော်ခဲ့ကြတယ် …တနလာင်္နေ့ကနေ တနင်္ဂနွေ နေ့ အထိ။
နေ၀င် မီးငြိမ်း မြို့တစ်မြို့ရဲ့ ရာဇ၀င်ဟာ သိပ်ပြီး သွေးပူစရာမကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ။
အဲဒီမှာ သက်ရှိတွေ ရှိတယ်။ သက်ရှိတွေ ရှိနေခဲ့တယ်။ အသက်တွေ ရှိနေခဲ့တယ်။
လယ်တောစပ်က ဒတ်ဒတ်မြည်သံ ဘာသံလဲ ဝေ့။
ခေတ်က ဘယ်ဘက် အိတ်ကပ်။ စနစ်က ညာဘက် အိတ်ကပ်။ အိတ်ကပ်တွေ လုံအောင် ပိတ်ထား။
မြို့ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ စက်ရုပ်ကျင့် စက်ရုပ်ကြံပါ။
ရိုက်သွင်းထားတဲ့ သံဟာ အဆိပ်တက်တာလား သံချေးတက်တာလား သံချေးတက်လို့ အဆိပ်တက်တာလား။
မြေစာပင်ဟာလည်း ကျွဲနှစ်ကောင်သာမရှိခဲ့ရင် လှနေမှာ။
ဒီကဗျာမှာ နံပါတ်စဉ်မပါရတဲ့ အကြောင်းက မရေရာမှုကို အလှပေါ်စေချင်လို့ပါ။
ဒါပါပဲ။ ဒီထက်ပိုပြီး ဒါပါပဲ။ ကျေးဇူးပါ။ အားလုံးကို မေတ္တာပို့ပါတယ်။
Posted by မိုးအိမ်လူ Unknown at 10:12 PM No comments:
သူတို့ စိတ် = ကျွန်တော့် စိတ်
အပြော ရှစ်ဆယ် အပြ နှစ်ဆယ်
ဘာမှမပြောရင်လည်း အခြားဘာမှပြောစရာမရှိ အသိပေးချက်။သတိပေးချက်။စစ်ဆေးကြည့်ရှု။ ဘယ်သူမှားသလဲ။ ဘယ်သူမှန်သလဲ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးကာနီးအထ...
သမရိုးကျ ဘ ကုန်း ဟာ ၀ ၀ လင် လင် တနာ တကျင်
ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ကြက်ခြေခတ်ပစ်လိုက်တော့ လွယ်လင့်တကူပဲ ကျွန်တော်ဟာ မှားသွားတယ် စာသားထဲမှာ စာသားထပ်နေတဲ့ စာသား အထပ်ထပ်တွေကြား...
အချစ်ဟုတ်လား မောင်ရေချမ်းကို လာမယှဉ်နဲ့ သီချင်းအသစ်ရသွားတယ်
နှင်းဆီတွေလား စံပယ်တွေလား ခရေတွေလား နက်ရှိုင်းလှတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ လျှာအရိုးမရှိ ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ခြင်းတွေနဲ့ ဆံနွယ်...
. စာသားတွေ အနက် ကွာကျလာမှုနဲ့ အတူ မနက်ဖြန် အရေးအသားတွေဟာ တောင်ခြောက် မြောက်ခြောက် ဖြစ် တော့မယ်လို့ တောင်ပြော မြောက်ပြော ကောလဟာလတေ...
နှင်းမြား တစ်လက်ရဲ့ ပုံပြင်
ဝေ့ခနဲ တိုက်ခတ်သွားတဲ့ လေတစ်သုတ်က အတိတ်တစ်အုပ်ကို ကြဲချသွားတယ်။ အောက်မေ့ခြင်းနဲ့ သတိရခြင်း တူညီသလား ဆိုတာ ကျွန်တော် အခုထိ မဝေခွဲတတ်သေး...
လွန်းဆက်နိုးမြတ် အရေးအသားလိုင်းများနှင့် အဖွဲ့အနွဲ့ဝါကျများ
ဆွေးမြေ့ဖွယ် နှင်းမြူတွေနဲ့ လုံးထွေးလို့။
ဘ၀၌ ရွတ်ဆိုခဲ့သမျှ မမေ့နိုင်
ဘ၀၌ မရွတ်ဆိုခဲ့ပေမယ့် မကြားနိုင်။
ကိုယ့်ဘက်က လိုက်လျောနိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
Get the Capricorn Clock widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeingawidget? (More info)
အက္ခရာဆန်သော သူများ - (က) “ဘာကွ မင်းက ဘာကို အပေါင်ထားမယ် ပြန်ပြောစမ်းပါဦး” “ဟုတ်. ကျွန်တော် မနက်ဖြန်ကို အပေါင်ထားချင်ပါတယ်” “မနက်ဖြန်က ဘယ်လောက်တန်လို့လဲကွ” “တန်ပါတယ်… ခင်ဗျား လု...